पाठकपत्रः स्वयम्भूमा हुने यौनजन्य गतिविधि किन नियन्त्रण गर्दैन सरकार ? - Ratopati
- | राजेन्द्र पौडेल
हामी नेपालीहरु धर्ममा हदैसम्म आस्था राख्छौं। हाम्रो रीतिरिवाज नै धर्मबाट प्रभाबित छ। घरमा अनुशासन पनि धर्मकै नाममा सिकाइन्छ। केही खराब काम गरेमा भगवान रिसाउछन्, भगवानले कान काटिदिन्छन् भनेर साना नानिबाबु हरुलार्इ तर्साइन्छ।
हिन्दु धर्म र बुद्ध धर्मलाई हामी लगभग एउटै मान्छौ। बुद्धलार्इ हामी भगवान बिष्णुकै अवतार मान्छौ। पशुपतीनाथ र स्वयम्भूनाथ हाम्रा ठुला धार्मिक धरोहर हुन्। विश्व सम्पदासूचिमा समेत यिनिहरु सुचिकृत भैसकेका छन्। धार्मिक महत्वको अलवा प्राकृतिक रुपमै सुन्दर छन् यी स्थान हरु।
काठमाडौंको उखर्माउलो गर्मी छल्न स्वयम्भू क्षेत्रको सितलताको वर्णन गरि साध्य छैन। प्राकृतिक सुन्दरता त छँदै छ,त्यसैमाथी उपत्यकाको मनोरम दृश्य हेर्न हजारौं स्वदेशी तथा बिदेशी नागिरिक जमघट भैरहन्छन्। पर्यटकिय हिसाबले भन्दा पनि धार्मिक हिसाबले नै स्वयम्भूको महत्त्व छ। त्यस्तो महत्वपुर्ण स्थलमा मैले जे देखेँ त्यस्ले मलाइ एकदम खिन्न बनायो।
हामी पुर्बिय दर्शनका नेपालीहरु यौनलाई सहज रुपमा लिनै सक्दैनौ। पश्चिमा संस्कृती हाम्रो समाजमा अपाच्य प्राय छ। त्यसमाथि धार्मिक स्थलमा देखिने यौनजन्य कृयाकलाप त्यो पनि सार्बजनिक रूपमा, झनै घृणित छ। धार्मिक आस्थाका केन्द्र मानिने स्वयम्भू जस्ता स्थलमा हुने त्यस्ता नकारात्मक गतिविधिहरु खै कसले नियन्त्रण गर्ने ? न त सरकारको नै ध्यान गएको छ, न त महानगरपालिकाको नै। यस्तै गतिविधि कायम रहने हो भने हाम्रा हरेक आस्थाका धरोहरहरुपछि बेश्यालयका रुपम बिकशित नहोलान् भन्न सकिँदैन।
हामी नेपालीहरु पनि बडो अचम्मका छौं। भारतले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्दा पत्याउँछौ अनि बिरोध गरेझै गर्छौ। तर हाम्रै कारणले त्यो सब भैरहेको छ भन्ने चेतना पाउदैनौं। हामीले हाम्रा धरोहरहरुमा कु कृत्य गर्ने कि संरक्षण गर्ने ? के स्वयम्भूमा डेटिङ जाँदैमा र यौनजन्य काम गर्दैमा माया प्रेम अजब हुने हो र ? मेरो अनुरोध, सार्बजनिक स्थल र धार्मिक क्षेत्रमा त्यस्ता यौनजन्य गतिविधि नहोस् । त्यस्ले हाम्रो स्वाभिमानमा आच आउँछ। बुद्ध माथि अन्याय हुन सक्छ।
देश बनाउने युबाले हो। सरकारको मात्र मुख ताक्नु मुर्खता हो। अनि देश बनाउने युबा नै असामजिक काममा सामेल हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । बरु, नेपालीको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ। यस्ता गतिबिधी नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान जाओस्।